Fiaramanidina kely nidoboka tao Ambano Antsirabe II: naratra mafy ilay mpanamory sy mpianatra vehivavy iray | NewsMada
Par Taratra sur 19/09/2020
Fotoana fohy taorian’ny niaingany tao amin’ny seranam-piaramanidina Antsirabe, nidoboka tamin’ny tranon’olona iray, ao Tsarafiraisana, Ambano Antsirabe II, omaly antoandro, ny fiaramanidina kely iray. Naratra mafy tamin’izany ilay mpanamory sy mpianatra ho mpanamory tao anatiny.
Nitrangana lozam-piaramanidina tao Antanivao Tombon­tsoa, fokontany Tsarafiraisana, kaominina ambanivohitr’Ambano, distrikan’Antsirabe II, omaly tamin’ny 12 ora sy 10 mn. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny talem-paritry ny Polisim-pirenena ao Vakinankaratra, fiaramanidina kely iray mitondra ny laharana 5RMKX no nianjera teo an-tokotanin’olona eo amin’io toerana io raha nikasa hihazo ny seranam-piaramanidina Antananarivo Ivato. Niainga tao amin’ny seranam-piaramanidin’ Antsirabe ity fiaramanidina ity tamin’ny 11 ora sy 40 mn ka vehivavy mpianatra ho mpanamory sy ny mpanamory sady mpampianatra ny niaraka aminy. Ireto olona roa ireto irery no tao anatin’ity fiaramanidina ity, araka ny tatitra voaray avy any an-toerana. Vao niainga kelikely anefa ilay fiaramanidina ka tamin’ny 12 ora sy 5 mn, fantatra fa nisy olana teknika tao amin’ny moterany ka nitarika ny fianjerany tao amina tokotanin’olona iray. Vokany, potipotika tsy nisy noraisina ilay fiaramanidina kely, nilatsaka mihitsy ny moterany. Naratra mafy ilay vehivavy mpianatra ho mpanamory sy ilay mpanamory niaraka aminy.
Nalefa any amin’ny hopitaly Loterana…
Fotoana fohy taorian’ny nitrangan’ny loza, tonga teny an-toerana nanao fizahana ny zava-nisy ny talen’ny fibaikoana ny Filaminam-bahoaka faritra Vakinankaratra sy ny lehiben’ny kaomisaria foibe Antsirabe, niaraka amin’ireo polisy miasa ao an-toerana. Nalefa any amin’ny hopitaly Loterana Andranomadio ireto olona roa naratra ireto, saingy tsy misy atahorana kosa ny ainy, araka ny tatitra nampitain’ny polisy. Naratra mafy teo amin’ny lohany izy ireo ary efa mahatsiaro tena. Nieren-doza ihany koa ireo olona tao amin’ny toerana nianjeran’ilay fiaramanidina. Ny elatra havian’ilay fiaramanidina no nahakasika ny trano ka nitarika ny fahasimbana. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana rehetra momba ity fianjerana fiaramanidina ity. Ahina ho tsy fahampian’ny tosika teo amin’ny motera teny am-piaingana no nitarika ny loza, saingy ny valin’ny fanadihadiana rehetra ny hamaritra ny marina rehetra momba ity raharaha ity.